Izinkampani ziqinise idolo ababukeli ngezinhlelo
ABALINGISI bomdlalo iGenerations: The Legacy okungoBusisiwe Xaba, Paballo Mavundla, Candice Modiselle noJunior Singo okuvele ukuthi ngeke kuphazamiseke ukuqoshwa kwawo njengoba ezokuphepha zizobe ziqinile ngenxa yokusabalala kweCoronavirus Isithombe: TWITTER
NOKUBONGWA PHENYANE | March 25, 2020
IZIKHONDLAKHONDLA zezinkampani ezikhombisa imidlalo nezinhlelo ezahlukene kuleli iSABC neMultichoice seziveze ukuthi ngeke kuphazamiseke ukuqoshwa kwezinhlelo ezahlukene ezikhonjiswa ngaphansi kwalezi zinkampani ngenxa yokuvalwa thaqa kwezwe izinsuku ezingu-21, okumenyezelwe nguMengameli Cyril Ramaphosa.
Lokhu kuyinto efanayo nasemisakazweni engaphansi kweSABC, ezoqhubeka nayo isakaze izinhlelo zayo ngaphandle kokuphazamiseka.
Kodwa lezi zinkampani zithe zizokwenza konke lokhu ngokulandela imiyalelo ekhishwe wuRamaphosa.
UMmoni Seapolelo okhulumela iSABC, ucele ukuthi wonke umuntu alandele imiyalelo ekhishiwe ngeCoronavirus.
“Ukuphepha kwawo wonke umuntu yikhona esikuhambisa phambili. Ezokuphepha ziqine kakhulu kuzona zonke izindawo zethu zokusebenza, ngakho abanye esisebenza nabo njengezinkampani ezisikhiqizela izinhlelo nemidlalo nazo ngeke ziphazamiseke,” kuchaza uMmoni.
Uthe njengoba uhulumeni esekhulumile bazoqhubeka nokufundisa abasebenzi nabo bonke abathintekayo ngokuzivikela egciwaneni.
“Izinhlelo ezithinta ukusakaza, ukufundwa kwezindaba nayo yonke imidlalo nezinhlelo ezikhonjiswa kwithelevishini zizoqhubeka nokusakazwa ngendlela.
Okhulumela iMultiChoice uJoe Heshu, uthe basezingxoxweni nazo zonke izinkampani ezibakhiqizela imidlalo nezinhlelo.
“Sinxusa zonke izinkampani ukuthi ziqhubeke nokuqikelela ziphinde zivikele abalingisi nabo bonke abasebenzi abangaphansi kwazo njengoba leli gciwane lithe chithi saka.
“Sesibonile ukuthi ezinye izinkampani zilimele kanjani kodwa thina sizoqhubeka nokubheka isimo ngeso elibanzi,” kuchaza uJoe.